Maamulka Yuhuuda oo Xasuuqday dad Gaadhaya 55 Ruux oo Mudaharaadayey + Dalalka Carabta oo afka ka wada Xidhay | Haldoor News
Maamulka Yuhuuda oo Xasuuqday dad Gaadhaya 55 Ruux oo Mudaharaadayey + Dalalka Carabta oo afka ka wada Xidhay
Gasa(Haldoornews)-Dhimashadii ugu badnayd ayaa Qasa ka dhacday tan iyo dagaalkii 2014kii, masuuliyiinta Falastiinna waxay sheegeen in ciidammada Israa’iil ay dileen 55 ruux ayna dhaawaceen 2,700 oo kale.
Ra’iisulwasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in milatarigiisu ay iska difaacayeen Xamaas oo jihaaddoon ah oo uu ku sheegay in ay doonayaan in ay burburiyaan Israa’iil.
Hogaamiyaha Falastiin ayaa cambaareeyay kuna tilmaamay “xasuuq”. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay “in uu dhacay xadgud laga caroodo oo xuquuqda aadanaha ka dhan ah”.
Falastiiniyiinta ayaa muddo todobaadyo ah dibadbaxayay hasayeeshee dhimashada ayaa sare u kacday maalinta uu Mareykanka safaaradda ka furtay magaalada Qudus.
Falastiiniyiinta ayaa arrintan u arka in Mareykanku uu si cad ugu taageerayo Israa’iil inay la wareegto gebi ahaanba magaalada, taas oo dhinaceeda bari ay Falastiiniyiintu sheegtaan.
Hasayeeshee Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa fariin muuqaal aheyd waxa uu ku amaanay tallaabada safaaradda dalkiisa Qudus loogu raray.
Waxa uu ka sheegay xafladda arrintaas loo sameeyay in muddaba laga soo shaqeeyay, waxa uu intaasi ku daray “Israa’iil waa dal madax bannaan oo xaq u leh inuu go’aan ka gaaro meesha uu caasimad ka dhiganaayo hasayeeshee sanado badan ayaannu iska dhegatirnay inaannu arrintaas qirno.”
Mareykanka ayuu sheegay inay “ka go’an tahay inuu fududeeyo heshiis lagu gaaro nabad waarta.”
Rabshadahani ayaa imaanaya xilli magaalada Qudus maanta uu Mareykanka safaarad ka furanaya taaso ka caraysiiyay shacabka Falastiiniyiinta.
Ururka Xamaas ee ka talliya marinka Qaza ayaa waday dibadbaxyo ay ugu magac dareen ‘dibadbaxyadii soo celinta’ kaaso socday muddo lix toddobaad ah.
Israa’iil waxay sheegtay in dibadbaxyaashu ay burburinayaan xayndaabka xadka.
Ciidammada Israa’iil waxa ay sheegeen in illaa 35,000 oo falastiiniyiin ah ay ka qaadanayaan isu soo baxyada rabshadaha wata.
“Maanta waa maalin weyn, waxaanan doonaynaa in aan xeendaabka gudubna, Israa’iil iyo adduunkaba u sheegno in aanan ogolaan doonin in waligeen nala heysto” ayuu yiri Cali oo macalin ka ah magaalada Qasa
Dadka maanta lagu dilay dibadbaxyada waxaa kamid ah carruur halka in ka badan 1000 qof ay ku dhawaacmeen.sida ay sheegtay laan arrimaha caafimadka ka shaqayso oo taabacsan kooxda Xamaas.
Heshiis dhexmaray Israa’iil iyo Falastiiniyiinta sanadkii 1993-dii ayaa waxa uu dhigayaa in meeqaamka Qudus laga wada xaajoodo mararkale.
Rarista safaarada ayaa ah guul weyn oo usoo hoyatay Ra’isulwasaare Netanyahu Dadka Yuhuuda ee ku dhaqan magaalada Tel Aviv ayaa ammaanay madaxweyne Trump, iyada oo la taagay tabeelooyin lagu bogaadinayo.
Furitaanka safaaradda ayaa horey loosoo dhigay si loo waafajiyo maalinta loo dabaaldagayo sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegtay markii la asaasay Israa’iil.
Hoggaamiyaha reer Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa go’aanka Trump ku tilmaamay “Dharbaaxadii Qarniga”, isaga oo intaas ku daray in wixii hadda ka dambeeya uusan Maraykanka ahaan karin dhexdhexaad arrimaha Bariga Dhexe